Bit By Bit - Ethics - 6.8 Mhedziso
Kutsvakurudza kwevanhu munharaunda yemadhigiri kunomutsa nyaya itsva dzetsika. Asi nyaya idzi hazvikwanisiki. Kana isu, semunharaunda, tinogona kukudziridza maitiro ehutsika pamwe chete nemitemo inotsigirwa pamwe nevatsvakurudzi uye vanhu vose, saka tinogona kubatanidza zvigadziro zvezera rejitori nenzira dzakakosha uye dzinobatsira vanhu. Ichi chitsauko chinomiririra kuedza kwangu kutitungamirira mune izvozvi, uye ndinofunga kuti chinokosha chichava chevatsvakurudzi kuti vaite mazano-based based thinking, vachiri kutevera mitemo yakakodzera.
Muchikamu 6.2, ndakatsanangura mapurojekiti matatu ekutsvakurudza kwemajeri akave akaita kuti nharo dzetsika dzivepo. Zvadaro, muchikamu 6.3 Ndakatsanangura izvo zvandinofunga ndicho chikonzero chikuru chekusava nechokwadi kwehutano mukutsvakurudza kwehuwandu hwemagariro evanhu: hutsva huchiwedzera hutsva kune vanotsvakurudza kuongorora uye kuedza kune vanhu vasina kubvumirwa kana kuziva. Izvi zvinokwanisa kuchinja nokukurumidza kupfuura mitemo yedu, mitemo, nemitemo. Zvadaro, muchikamu 6.4, ndakatsanangura mazano mana aripo anogona kutungamirira mafungiro ako: Kuremekedza vanhu, Kubatsirwa, Kururamisira, uye Kuremekedza Mutemo uye Kufarira. Zvadaro, muchikamu 6.5, ndakanyora muchidimbu zvirevo zviviri zvehutano hwakakosha-kugoverana uye dheontolo-iyo inogona kukubatsira neimwe yezvinetso zvakakomba zvingasangana nazvo: Ndezvipi zvakakodzera kuti iwe utore nzira dzisina mubvunzo dzinogadziriswa kuitira kuti uwane zvinoenderana nemitemo kuguma. Iyi mitemo uye tsika dzakanaka ichakubatsira kuti uende mberi unotarisa kune zvinoregererwa nemitemo iripo uye kuwedzera kukwanisa kwako kukurukura kufunga kwako nevamwe vanotsvakurudza uye vanhu vose.
Ndizvo zvakasikwa, muchikamu 6.6, ndakakurukura nharaunda ina dzinonyanya kuoma kune vedijitori-yezera revanhu vanoongorora zvekugarisa: chibvumirano chakanaka (chikamu 6.6.1), kunzwisisa nekugadzirisa dambudziko rekuziva (chikamu 6.6.2), ruvande (chikamu 6.6.3 ), nekuita zvisarudzo zvemitemo pasinei nekusaziva (chikamu 6.6.4). Pakupedzisira, muchikamu 6.7, ndakagumisa nemazano matatu anobatsira ekushanda munzvimbo ine tsika dzisina kugadzikana.
Tichitevera kukura, chitsauko ichi rinotarisa nemaonero munhu mutsvakurudzi kutsvaka generalizable ruzivo. Zvazvakadaro, anosiya mibvunzo inokosha pamusoro kuvandudzika kuti hurongwa chemufungo dzokutarisira kutsvakurudza; mibvunzo pamusoro mutemo kuunganidza uye kushandiswa mashoko nemakambani; uye mibvunzo pamusoro vakawanda nokuongororwa nehurumende. mimwe mibvunzo ava pachena kunzwisisa uye zvakaoma, asi tariro yangu kuti vamwe pfungwa pakutsvakurudza nezvetsika vachava kubatsira izvi dzimwe nguva achinzi.